Vaovao - Inona avy ireo tombony manintona an'ny tsipika Eps
Inona avy ireo tombony manintona an'ny tsipika EPS?
Ny tsipika EPS dia afaka mamita ny fitehirizana ny hafanana, ary tsy mitombina ny haingon-trano. Vahaolana tsara kokoa ny olana amin'ny famakiana tany, mba hiaraha-mitantana ny fanamboarana, ny fametrahana azy, ny insulated thermal ary ny olana amin'ny tetezana hafanana amin'ny tsipika haingon-trano isan-karazany, izay mitahiry fotoana sy mitsitsy fitaovana. Taorian'ny fanodinana lalina tsy ara-dalàna ny tabilao polystyrene EPS, ny lamba fitaratra fibre vita amin'ny vera dia ampiana eo ivelan'ny tabilao EPS, ary ampiana ny sosona faharoa misy sosona fiarovana manokana. Ny birao EPS fiarovana Wannian dia tsy iharan'ny famoronana mari-pana, ny toetr'andro mando, ny orana asidra ary ny fifandonana sy ny fikafika ambany kokoa, manolo ny fizarana tsipika mihombo vita amin'ny sakana simenitra sy fibre fitaratra, izay mihatra indrindra amin'ny rafitra fandravahana rindrina ivelany an'ny Fiarovana ivelany rindrin'ny rindrina EPS, mba hialana amin'ny tetezana mangatsiaka sy mafana amin'ny rindrina ivelany lamba. lohateny
Ny fomba fanamboarana ny rindrina ivelany rindrina villa:
Alohan'ny fananganana tsipika haingon-trano EPS, ny lavenona mitsingevana sisa, menaka famotsorana sy fako hafa ary faritra poakaty amin'ny lalotra dia tokony hodiovina amin'ny rindrina vita amin'ny beton. Esory ny sakana vita amin'ny beton, ny fampidirana, ny amponga tsy misy fangarony, sns. mampiasa simenitra simenitra mba hahitanao ny fitongilan'ny varavarankelin'ny varavarankely arakaraka ny 2%, ary ireo varavarana isan-karazany amin'ny rindrina ivelany dia feno hipoka. Iangaviana ny tsy tokony hihoatra ny 5mm ny fiviliana amin'ny fisaka amin'ny plastika. Rehefa mihoatra ny fandeferana dia hatsahatra ny rindrin'ny rindrina, ary hijanona ny ampahany mihidy (raha mihoatra ny 6 mm ny hateviny, dia ampiasao feta simenitra 1: 3 ho an'ny lalotra, ary mila hita ny hateviny. Rehefa kely izany mihoatra ny 6 mm, ny vatan'ny fananganana fanamafisam-peo dia mampiasa fotaka fametahana polymer hanamboarana); hahazoana antoka fa ny fisaka amin'ny rindrina iray manontolo dia ao anatin'ny 5 mm, ary ny zoro an'i Yin sy Yang dia toradroa sy malama.
Aorian'ny fanomanana ny rihitra dia tsy maintsy ajanona mandritra ny 5 minitra izy, ary hajanona indray ny fikororohana alohan'ny hampiasana azy. Ny rihitra miharo no ampiasaina ao anatin'ny adiny 1. Araka ny sary fananganana, dia misy tsipika fametrahana (tsipika afovoany na tsipika sisiny) hipoitra amin'ny toeran'ny tsipika haingon-trano EPS hapetraka. Hetezo ny singa EPS arakaraka ny haben'ny fitaovana fanaovana sary. Ny zorony dia tokony hokapaina amin'ny zoro 45 ° amin'ny fisarahana. Ireo singa EPS dia habe mahazatra rehetra. Ny sakan'ny seam manasaraka dia tokony hojerena rehefa manapaka.
Masinina Cornice Cornice Eps, Eps sombin-javatra Cornice endrika famolavolana milina, Eps Cornice koronosy tsipika, Eps Cornice Famolavolana tsipika famokarana, Masinina famolavolana endrika Eps Cornice, Eps fanaovana koronosy Cornice,